Ngendebe - China Shandong Huaxin Electric lembuthuma
Thina zigcwalisa lesi siprofetho ngokunikela ububanzi sasendle amandla ladle kakhulu 0.3ton ukuba 90ton, siphinde akhiqize ladles okusekelwe izidingo iklayenti. 1.Product Incazelo Zonke ladles Foundry kungenziwa umshini wokuphehla inhlangano motor igiya ukuze Ukujikeleza sikagesi. I ngesivinini Ukujikeleza kungaba ulungise izidingo zamakhasimende. Isicelo Ekubunjweni Foundry ladle Zezıhlabane ladle metal umsebenzi Foundry thusi, ngemva kokuqala yensimbi ketshezi phambi isithando, ulithumele endaweni imodeli asakazwe uthele ngo dri ...
Thina zigcwalisa lesi siprofetho ngokunikela ububanzi sasendle amandla ladle kakhulu 0.3ton ukuba 90ton, siphinde akhiqize ladles okusekelwe izidingo iklayenti.
1. Incazelo Product
Zonke ladles Foundry kungenziwa umshini wokuphehla inhlangano motor igiya ukuze Ukujikeleza sikagesi. I ngesivinini Ukujikeleza kungaba ulungise izidingo zamakhasimende.
Isicelo Ekubunjweni Foundry ladle
Zezıhlabane ladle metal umsebenzi Foundry thusi, ngemva kokuqala yensimbi ketshezi phambi isithando, ulithumele endaweni imodeli asakazwe ukuthulula ngokuxosha imoto.
Ladle ngoba steelmaking isitshalo, Foundry endaweni evulekile kwemizi somlilo, esithandweni noma Converter steel encibilikisiwe, ekubunjweni ukusebenza ngaphambi isithembiso.
I oncibilikisiwe yensimbi ladles zihlukaniswe ophephela ezimbili ngendlela ukudluliswa rotary futhi iqonde igiya ukudluliswa self-ukukhiya uhlobo izinhlobo ezimbili (1:72, 1 isilinganiso: 75) .I Izici eziyinhloko: rotary isikhungo design uyacabangela, ezimbili ngendlela esethola kahle, oluyisisekelo reset.Turbine ezimbili ngendlela ukudluliswa uhlobo lwe-rotary usebenzisa indlela ekabili ophephela okuphambene ukudluliswa, ukudluliswa bushelelezi, operation elula, consistency.Straight ezimbili indlela enhle kusukela kushaft Ilokhi igiya ukudluliswa usebenzisa uhlobo eziphezulu, amaleveli double lokulawula friction, ukusebenza self-uvala sinamandla, engasindi ngokukhululekile, ingakhishwa ngenkani zangaphandle kancane, buyela ngokushesha, musa kowtow, ukusetshenziswa ephephile futhi eqotho.
2. Isici wokuhlwanyela yensimbi ladle
1) .Reasonable ukukhetha isikhungo ukujikisa, operation elula, eyisisekelo kungenza kwenezele lapho ethela isiqedile.
2) .Adopt double isondo impethu pair transmission.Although yokukhiqiza funa kuphezulu, kodwa ukudluliswa nezimo, ezimbili indlela emuva.
3) .Enclosure wenziwe mkhulu steel plate, phansi isakhiwo isikhwama ngokuzitholela inhlanganisela taper, usebe phansi, Welding umshwalense kathathu, eyayize ifike impilo inkonzo, futhi aqinisekise ukuphepha kwezingane ezihlukunyeziwe opharetha.
3. imingcele Technical
Previous: esithandweni ushintsho switch
Okulandelayo: Womoya lembuthuma Isakhiwo Machine